असहज यात्राको एक यात्री…. ::When Saugat Speaks, Others listens
असहज यात्राको एक यात्री….
भनिन्छ, कठिन यात्राले अक्सर सुन्दर गन्तव्य तर्फ डोर्योउछ । तर, यो यात्रा जतिनै कठिन भएपनि गन्तव्य सुन्दर थिएन । किनभने, आफूले चाहेर पनि गन्तव्यलाई सुन्दर बनाउन नसकिने यात्रा थियो यो । तर, दृढ संकल्प, मिहिनेत, निस्वार्थ कर्म र अठोटले कुनै दिन यो यात्रालाई पक्कै पनि सफल र सुन्दर बनाउनेनै छ । राज्यको कानुन परिवर्तनकालागि शुरु भएको यहि यात्रासँगै निरन्तर अघि बढिरहेका छन्, उज्जवल विक्रम थापा । तेजाब आक्रमणको विरुद्धमा निरन्तर छ वर्षदेखि अभियान चलाइरहेका थापा एकल अभियन्ता हुन् । संगिता मगर र सिमा बस्नेत हुदैँ मुस्कान खातुनको उपचारका लागि थापाले निरन्तर आर्थिक सहयोग जुटाएका छन् । पिडितको उपचारकालागि आर्थिक सहयोग जुटाउने, आत्मविश्वास बढाउने र पिडितकालागि अभिभावकत्व निभाइरहेका थापा यतिमा मात्र सन्तुष्ट छैनन् । अपराधिहरुलाई जन्मकैदको सजाय दिने कानुन निर्माणकालागि राज्यलाई दबाब दिनु उनको मुख्य प्राथमिकता हो । थापाले तेजाब आक्रमणमा परेका चेलिहरुकालागि अभिभावकको भुमिका निभाएका छन् । तेजाब आक्रमण सम्बन्धि कमजोर कानुनका कारण आज पिडितले न्याय नपाएको उनको गुनासो छ । राज्यले एसिड सम्बन्धि कडा कानुन बनाउने हो भने उक्त घट्ना न्युनिकरणकालागि समय नलाग्ने थापा बताउँछन् । थापालाई राज्यको उदासिनताले चिमोट्छ तर बिना स्वार्थ सेवामा लागेका हातहरु अरुको कमजोरी वा असहयोगले थाक्दैन रहेछ । उनले निरन्तर ६ वर्षदेखि विभिन्न एसिड आक्रमणका घट्नाहरुसँग नजिक भएर निहालेका छन् । एक वर्षअघि असोज ८ गते एसिड आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकि सम्झना दासको अनुहार उनीसामु झल्झल आउँछ । उनको छट्पटाहट र त्यो कोलाहल माहोललाई थापाले बिर्सन सकेका छैनन् । बिर्सिउन् पनि कसरी, थापा तिनै सम्झनाको उपचारकालागि दिनरात जुटेका थिए । आखाँ सामु दासको मृत्यु थापाकालागि असह्य पिडा थियो । दास जस्तै अरु नारीहरुपनि एसिड आक्रमणको सिकार हुन्छन् भन्ने थापालाई थाहा थियो । किनभने, देशको कानुन कमजोर छ र कमजोर कानुनको परवाह अपराधिलाई कहाँ हुन्छ र ? एसिड आक्रमणको विरुद्धमा न्यायिक लडाई लड्ने एकल अभियन्तालाई आज राज्यले सहयोग गरेन भने यो यात्राको गन्तव्य पक्कै पनि सुन्दर हुनेछैन र नेपाली नारीहरु असुरक्षित भइरहनेछन् ।
राज्यको ध्यानाकर्षणकालागि यात्रा
विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले एसिड आक्रमणको घट्नालाई अंगभंग भएको मानेर आठ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । बढीमा ८ वर्षको जेल सजाय र पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको कानुनि व्यवस्था छ । तर, थापा एसिड आक्रमणको घट्नालाई जघन्य अपराधका रुपमा लिन्छन् । उनले निरन्तर अपराधिलाई जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । गत भदौ २० गते शुक्रबार बिहान विद्यालय जादै गर्दा विरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ छपकैयाकी १५ बर्षिया मुस्कान खातुनमाथि एसिड आक्रमणको घट्नाले निकै चर्चा पायो । थापाको आग्रहमा खातुनलाई बलिउडका अभिताभ बच्चन, साहरुख खान सहित विश्वकै चर्चित कलाकारहरुले शिघ्र स्वास्थ्य लाभको संदेश पठाएका थिए । एसिड आक्रमणको घट्नालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न थापाको पहललाई जति बयान गरेपनि शब्द कम पर्छ । किनभने, उनले खातुनमाथि भएको आक्रमणको घट्नालाई सबैसामु पु¥याएका छन् । कानुनि व्यवस्था कडा हुन सक्यो भनेमात्र एसिड आक्रमणको घट्ना न्युनिकरण हुन्छ । त्यसैले, थापाले निरन्तर राज्यलाई यो जघन्य अपराधका बारेमा परिचित गराइरहेका छन् । राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्न र नागरिकलाई एसिड सम्बन्धि चेतना बढाउन थापाले निरन्तर कदम चालिरहेका छन् ।
हालै, मुस्कान खातुनको परिवारलाई लिएर थापा भ्वाइस अफ नेपालको सिजन २ मा पुगे । निकैनै चर्चा बटुलिरहेको उक्त प्रतियोगितामा थापाले एसिड आक्रमण सम्बन्धि कुराहरु उठाए । उक्त प्रतियोागिता हेर्ने दर्शक लाखौँ छन् । यहि भ्वाइसको माध्यमबाट थापाले राज्यलाई ध्यानाकर्षण समेत गरे । बिना कुनै स्वार्थ पारदर्शि ढंगमा समाजसेवामा लागेका थापाको यात्राको गन्तव्यलाई सफल बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यो गन्तव्य थापाको मात्र नभएर पुरै नेपाली नारीहरुको गन्तव्य हो । देशको कानुन बलियो बनाउन सके नारीहरु केहि हदसम्म सुरक्षित हुन्छन् । त्यसैले, राज्यले एसिड आक्रमण सम्बन्धि कडा कानुन बनाउन ढिलाई गर्नुहुदैँन । त्यसैगरि, जनतामा चेतना बढाउन पनि राज्यले विशेष जोड दिनुपर्छ ।